EMUI 9.0, the latest Android9Pie-Based OS | HUAWEI Myanmar
EMUI 9.0 က နည်းပညာပိုင်းမြင့်မားမှုကိုသာမက သဘာဝရဲ့ ရိုးရှင်းမှုတွေကိုပါ ခံစားစေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မြှင့်တင်မှုက AI ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ၊ အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတွေနဲ့အတူ နေ့စဉ်ဘဝမှာ တိုးတက်မှု၊ လျင်မြန်မှုများ ရရှိစေမှာပါ။
EMUI 9.0 က AI ရဲ့ ခန့်မှန်းပုံဖော်နိုင်တဲ့ နည်းပညာများနှင့်အတူ ပိုပြီးတိကျအောင်၊ သက်သာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့် ပုံမှန်အချိန်မှာ System ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက ၂၅.၈% ပိုမိုလျင်မြန်လာမှာဖြစ်သလို App တစ်ခုခုဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်း ၁၀၂ မီလီစက္ကန့်အထိ ပိုမိုလျင်မြန်လာပါတယ်။ ခြုံပြောရရင်တော့ System Fluency ပိုင်းမှာ ၁၂.၉% လျင်မြန်လာတာပါ။1.
ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ Navigation ပုံစံ
Gesture Navigation အသစ်က ပိုပြီးလွယ်ကူလာသလို မျက်နှာပြင်အပြည့်လည်းသုံးလာနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်မှညာ၊ ညာမှဘယ်ကိုဆွဲရင် Back
အောက်မှအပေါ်ဆွဲပြီးခဏရပ်ထားရင် Task Manager
ခရီးထွက်နေတဲ့အချိန် Landmarks တွေ ဒါမှမဟုတ် ပန်းချီတွေကို HiVision နဲ့ Scan လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ သူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကို သိရှိနိုင်မှာပါ။ ဒါမှမဟုတ် တခြားနိုင်ငံတစ်ခုက စားသောက်ဆိုင်မှာဖြစ်ဖြစ် Menu တွေကို တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဘာသာပြန်နိုင်သလို HiVison ကနေ အစားအသောက်တွေရဲ့ ကယ်လိုရီပမာဏတွေတိုင်းတာလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။
ပိုမိုကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ PC Mode မှာဆိုရင် Graffiti Pen ကိုသုံးပြီး စာတွေရေးနိုင်၊ အမှတ်အသားတွေလုပ်နိုင်ရုံသာမက အစည်းအဝေးထဲမှာတင် Screenshot ဖမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ထားချိန် ဖုန်းလာတာတို့၊ စာဝင်တာတို့ဆိုလည်း တစ်ဖက်မျက်နှာပြင်မှာ မမြင်ရပဲ ဖုန်းမှာပဲမြင်နေရမှာပါ။ မိသားစုနဲ့ ဗီဒီယိုပဲကြည့်ကြည့်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ Idea ပဲ မျှဝေမျှဝေ အားလုံးအဆင်ပြေစေမှာပါ။2.
ကြိုးမဲ့စနစ်နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ Print ထုတ်မယ်
EMUI 9.0 နဲ့ဆို ဖိုင်တွေ Print ထုတ်ရတာပိုမိုလွယ်ကူလာပါပြီ။ တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ Print ထုတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ကြိုးတွေ၊ တခြားပစ္စည်းတွေ မလိုတော့ပါဘူး။3.
HUAWEI ဖုန်းအသစ်ပြောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ HUAWEI Phone Clone က EMUI 9.0 နဲ့အတူ Contacts တွေ၊ App တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းပေးမှာပါ။ ဒီလိုလျင်မြန်တဲ့ကူးပြောင်းမှုကြောင့် ချက်ချင်းဖုန်းအသစ်ကို ချက်ချင်းသုံးနိုင်မှာပါ။4.
Phone Clone အကြောင်းပိုမိုကြည့်ရှုရန်
EMUI 9.0 က သဘာဝရဲ့အငွေ့အသက်တွေ၊ အသံတွေကို ထင်ဟပ်စေအောင် အရိုးရှင်းဆုံးဖန်တီးထားတာပါ။ သဘာဝရဲ့အရောင်အသွားအလာတွေ၊ အလင်းအမှောင်တွေ၊ အရိပ်တွေနဲ့ တောင်တွေ၊ သမုဒ္ဒရာ၊ ရေ၊ ကျောက်တုံးစတဲ့ အငွေ့အသက်တွေကို မှီငြမ်းပြီး ဖန်တီးထားတယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ Vibration Feedback အသစ်နဲ့ အသံအသစ်က မတူညီတဲ့ အတွေ့အကြုံသစ်တွေကို ရရှိစေဦးမှာပါ။
App တစ်ချို့ကို ဒီဇိုင်းပြင်ဆင်ပေးထားတာကြောင့် လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူ ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Application တွေရဲ့ Password ကို Fingerprint, Face Unlock ဒါမှမဟုတ် Lock Code တွေနဲ့ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ထားနိုင်ပါတယ်။
EMUI 9.0 က သင့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒေတာတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ Back Up ပြုလုပ်နိုင်ပြီး USB နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ SD Card နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ Network-attached Storage (NAS) နဲ့ဖြစ်ဖြစ် လုံခြုံစိတ်ချစွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ်ဖုန်းဘယ်လောက်သုံးလဲ၊ Noti တွေဘယ်လောက်ကြည့်လဲ၊ ဘယ် App ကို ဘယ်လောက်သုံးလဲ၊ စတဲ့ Screen Time Management အတိအကျကို EMUI 9.0 က ပေးနိုင်ပါပြီ။ အဲ့တော့ အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကို သတိထားမိပြီး အကောင်းဆုံး Digital Balance ကို ရရှိစေမှာပါ။5.
EMUI 9.0 မှာ အိပ်ယာဝင်ချိန်တွေကို အကောင်းဆုံးချိန်ညှိထားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆို ဖုန်းမျက်နှာပြင်က မီးခိုးရောင်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဖုန်းသုံးချင်စိတ်ကို လျော့ချပေးနိုင်မှာပါ။
4. Compatible with devices running IOS 6.0, Android 4.0 and above.